Marigny Calculator: otu esi eji usoro Marigny na ịkụ nzọ na roulette
Maraworị ihe ọ bụ maka e otu esi eji usoro Marigny?
Marigny de Grilleau (1855-1942) bụ onye ọka mmụta roulette, echetara nke ọma maka akwụkwọ ya Le nweta Scientificque d'une seule unitè, ụdị ederede dị nsọ maka ndị na-akwado egwuregwu 'ọbụlagodi' ma ọ bụ ndaba nke 'kụrụ nhọrọ'.
Ihe omumu nke oge ahu dubara ya inyocha ihe o lere anya dika ihe Achilles nke roulette, ya bu: oghere.
Iji ghọta ma ọ bụrụ na ọdịiche (oghere) a na-ahụ anya dabara na usoro ahụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nọ n'ọnọdụ oke nke onye ọkpụkpọ ahụ ga-erigbu, Marigny mepụtara usoro dị mfe, nke gosipụtara na ọdịiche dị n'etiti ohere abụọ na-emegiderịta agaghị agabiga. okpukpu ise nke mgbọrọgwụ nke mgbalị ndị a hụrụ.
Dịka ọmụmaatụ, na 100 roulette spins (mgbọrọgwụ square nke 100 = 10) ọdịiche Marigny bụ 5 x 10 = 50.
Na strok 200 (mgbọrọgwụ nke 200 = 14,14) njedebe njedebe bụ 5 x 14,14 = 70,7.
Iji chọpụta ọnụọgụ nke ọdịiche anyị na-ahụ, anyị nwere ike iji usoro ndị na-esonụ, nke bara uru maka njikọta niile nke roulette ma ọ bụ egwuregwu ọ bụla ma yabụ ọ bụghị naanị maka ohere dị mfe, dị ka atụgharị uche n'oge ahụ site na Marigny.
Mgba = (2 x P x N - 2 x C) / RQ (2 x P x N)
Otu esi eji usoro Marigny: nkọwa nke usoro
CM= Marigny ọnụọgụ;
P = Ikekwe nchikota (na-echeghị efu);
N = Ọnụ ọgụgụ zuru ezu nke mgbalị hụrụ;
C = Number nke sorties nke chọpụtara ohere.
Iji maa atụ, na okirikiri nke 200 spins nke roulette, anyị na-edekọ na nke ise nke isii pụtara ugboro 16: nke a bụ oke ọdịiche?
Na-enweghị imebi isi gị nke ukwuu na ngụkọta oge, ịnwere ike iji ya Marigny Calculator, enwere ike ibudata site na njikọ dị n'okpuru na ekele nke ị nwere ike ime ka ọnọdụ ahụ doo anya ọ bụghị naanị maka Roulette, kamakwa maka egwuregwu ndị ọzọ, gụnyere ịkụ nzọ egwuregwu.
N'ihe atụ dị n'elu, uru nke mmemme ahụ ga-alaghachi bụ 4,2458 ma dị elu, mana ọ ka dị anya na njedebe nke 5.
Otu esi eji usoro Marigny: ngwa maka ịkụ nzọ egwuregwu
Maka egwuregwu ịkụ nzọ na ngụkọta oge ahụ yiri, ịkwesịrị ịka akara na ego dị n'elu (Sportsgba Egwuregwu) ma tinye ụkpụrụ, gụnyere nsogbu ndị ị na-egwu egwuregwu, nke a ga-aghọta na nke a dị ka ihe nkwụsị (Odg Odd).
Ma olee uru ịmara ọnụọgụ Marigny maka ịkụ nzọ bọl?
O doro anya na anyị agaghị enwe ntụzi aka maka nzọ anyị, mana site na ịkụ nzọ a ma ọ bụ sọftụwia sọftụwia ị ka nwere ike ịtụle (ọ bụghịkwa obere) ịdị irè nke usoro / nhọrọ ị na-etinye.
N'ezie, ọ bụrụ na ịchọrọ ịnwe 'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ' ihe akaebe nke ịkụ roulette ma ọ bụ egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ onye na-ede akwụkwọ na usoro gị, n'ezie ngwá ọrụ ahụ Marigny Calculator ọ ga-abụ ezigbo mmesho na asambodo ngwá ọrụ.
N'ezie, ọ bụrụ na site na itinye nsonaazụ edere na usoro ịkụ nzọ egwuregwu ị kwesịrị ị nweta uru CM ruru ma ọ bụ karịa 5, ị nwere ike ịtụle ntinye akwụkwọ ụgbọ mmiri Caribbean ma ọ bụ ụgbọ ala okomoko ị na-atụ anya ya!
Nbudata Nbudata	Marigny.zip - 1 MB